उपत्यकासहित कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? (तथ्यांकसहित) | Ratopati
उपत्यकासहित कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? (तथ्यांकसहित)
बितको २४ घण्टामा काठमाडौंमा ८१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै ललितपुरमा ६८ र भक्तपुरमा ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसैगरी मोरङमा १०५, कैलालीमा १६१, रुपन्देहीमा ९१ सहित अन्य विभिन्न जिल्लामा गरी बितेको २४ घण्टामा मात्रै १९११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ७९ हजार ७२८ पुगेको जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म ५७ हजार ३८९ जना कोरोना मुक्त हुँदा देशभर सक्रिय संक्रमिमतको संख्या २१ हजार ८३० पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बिहीबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा हाल संस्थागत आइसोलेशनमा १० हजार ७६१ र होम आइसोलेशनमा ११ हजार ६९ हजार रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै हाल देशभर आईसीयूमा २२० र भेन्टिलेटरमा २५ जना रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या ५०९ पुगेको छ ।
सामाजिक दूरी कायम गरी दसैँ मनाउन मुख्यमन्त्री भट्टको आग्रह
चाडपर्वले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को सोच साकार पार्ने प्रेरणा पैदा गरोस् : मुख्यमन्त्री शाही